Kushambadzira Kunoda Hunhu Dhata kuti ive Dhata-Inofambiswa - Matambudziko & Solutions | Martech Zone
Chipiri, June 14, 2022 Chipiri, June 14, 2022 Farah Kim
Vatengesi vari pasi pekumanikidzwa kwakanyanya kuti vafambiswe nedata. Asi, hauzowana vatengesi vachitaura nezvehurombo hwemhando yedata kana kubvunza kushomeka kwekutonga kwedata uye muridzi wedata mukati memasangano avo. Pane kudaro, vanoedza kuve data-inofambiswa ne data rakashata. Njodzi dzinotyisa!
Kune vazhinji vatengesi, matambudziko akaita sedhata isina kukwana, typos, uye duplicate hazvitombo zivikanwa sedambudziko. Vaizopedza maawa vachigadzirisa zvikanganiso paExcel, kana kuti vangave vachitsvaga maplugins ekubatanidza madhata nekuvandudza mafambiro ebasa, asi havazive kuti idzi inyaya dzemhando yedata dzine chekuita nesangano rese zvichikonzera mamirioni ekurasika. mari.
Vashambadzi nhasi vakaremerwa nemametrics, maitiro, mishumo, uye analytics zvekuti ivo havana nguva yekunyatso chenjera nematambudziko emhando yedata. Asi ndiro dambudziko. Kana vatengesi vasina data chaiyo yekutanga, munyika vangakwanisa sei kugadzira mishandirapamwe inoshanda?
Ndakasvika kune vatengesi vakati wandei pandakatanga kunyora chidimbu ichi. Ndakaita rombo rakanaka Axel Lavergne, Co-muvambi we ReviewFlowz kugovera ruzivo rwake nedata rakashata.
Heano mhinduro dzake dzinonzwisisa kumibvunzo yangu.
Ndeapi matambudziko ako ekutanga nemhando yedata pawakanga uchivaka chigadzirwa chako? Ini ndaimisikidza injini yechizvarwa chekuongorora uye ndaida zvikorekedzo zvishoma kuti ndiwedzere kutumira zvikumbiro zvekuongorora kune vatengi vanofara panguva yavaizosiya ongororo yakanaka.
Kuti izvi zviitike, timu yakagadzira Net Promoter Score (NPS) ongororo yaizotumirwa mazuva makumi matatu mushure mekunyoresa. Pese mutengi paanosiya NPS yakanaka, kutanga 30 negumi, yozowedzerwa kusvika pa9, 10, negumi, vanokokwa kuti vasiye ongororo uye vatore kadhi rechipo remadhora gumi. Dambudziko guru apa raive rekuti chikamu cheNPS chakamisikidzwa pachikuva chekushambadzira otomatiki, nepo data yaive yakagara muNPS chishandiso. Yakabviswa data masosi uye data risingawirirani pamaturusi rakava bhodhoro raida kushandiswa kwemamwe maturusi uye mafambiro ebasa.
Sezvo timu ichienderera mberi nekubatanidza kuyerera kwakasiyana-siyana uye mapoinzi ekubatanidza, vaifanira kubata nekuchengetedza kuenderana nedata renhaka. Chigadzirwa chinoshanduka, zvinoreva kuti data yechigadzirwa inogara ichichinja, zvinoda kuti makambani achengete inowirirana yekuzivisa data schema nekufamba kwenguva.
Ndeapi matanho amakatora kugadzirisa dambudziko? Zvakatora kushanda kwakawanda nechikwata chedata kuvaka chaiyo data engineering yakatenderedza iyo yekubatanidza chikamu. Inogona kunzwika seyakakosha, asi nekubatanidzwa kwakawanda kwakasiyana, uye kwakawanda kwezvigadziriso zvekutumira, zvinosanganisira zvigadziriso zvine chekuita nekusaina kuyerera, taifanira kuvaka akawanda akawanda akasiyana logic anoyerera zvichienderana nezviitiko, static data, nezvimwe.
Dhipatimendi rako rekutengesa rakave nekutaura mukugadzirisa matambudziko aya here? Chinhu chinonyengera. Paunoenda kuchikwata chedata uine dambudziko chairo, unogona kufunga kuti iri nyore kugadzirisa uye izvo zvinongotora 1h kugadzirisa asi kazhinji kazhinji inosanganisira toni yeshanduko yausingazive. Mune yangu chaiyo kesi nezve plugins, iyo huru sosi yezvinetso yaive kuchengetedza inowirirana data nenhaka data. Zvigadzirwa zvinoshanduka, uye zvakaoma chaizvo kuchengetedza inowirirana yekuzivisa data schema nekufamba kwenguva.
Saka hongu, zvirokwazvo kutaura maererano nezvinodiwa, asi kana zvasvika kune maitiro ekuita zvigadziriso nezvimwe. uye "kudzivirira" iyo data kubva kune ramangwana rekuvandudza.
Sei vatengesi vasiri kutaura nezvazvo Data management kana mhando yedata kunyangwe ivo vari kuyedza kufambiswa nedata? Ndinofunga inyaya yekusaziva dambudziko. Vazhinji vatengesi vandakataura navo vasingatarisire matambudziko ekuunganidza data, uye zvakanyanya, tarisa maKPI anga aripo kwemakore asina kumbovabvunza. Asi chaunodaidza kuti kusaina, kutungamira, kana kunyange muenzi akasarudzika anochinja zvakanyanya zvichienderana nekutevera kwako kuseta, uye pachigadzirwa chako.
Muenzaniso wakanyanya: wanga usina kana email yekusimbisa uye chikwata chako chechigadzirwa chinochiwedzera. Chii chinonzi kusaina ipapo? Isati yasimbiswa kana mushure? Ini handisi kuzototanga kupinda mune ese ewebhu ekutevera zvinyengeri.
Ini ndinofunga zvakare ine zvakawanda zvekuita nekupihwa uye nzira iyo zvikwata zvekushambadzira zvinovakwa. Vashambadziri vazhinji vane basa rechiteshi kana chidimbu chechiteshi, uye kana iwe ukapeta izvo nhengo yega yega yechikwata inoratidzira kune yavo chiteshi, iwe unowanzo kutenderedza 150% kana 200% yehunhu. Zvinonzwika zvisina musoro kana ukazviisa saizvozvo, ndosaka pasina anoita. Chimwe chinhu chingangove chekuti kuunganidza data kunowanzo kudzika kune zvakanyanya hunyanzvi nyaya, uye vatengesi vazhinji havanyatso kujairana nazvo. Pakupedzisira, haugone kushandisa nguva yako pakugadzirisa data uye kutsvaga pixel-yakakwana ruzivo nekuti haungoiwana.
Ndeapi matanho anoshanda / ekukurumidza aunofunga kuti vatengesi vanogona kutora kugadzirisa mhando yedata revatengi vavo?Zviise iwe pachako shangu dzemushandisi, uye edzai imwe neimwe yemafaniro ako. Zvibvunze kuti ndechipi chiitiko cherudzii kana shanduko yauri kuita padanho rega rega. Ungangoshamiswa zvikuru nezvinoitika chaizvo. Kunzwisisa zvinorehwa nenhamba muhupenyu chaihwo, kumutengi, mutungamiri kana mushanyi, kwakakosha pakunzwisisa data rako.
Kushambadzira Kune Kunzwisisa Kwakadzika kweMutengi Asi Kunetsekana Kuwana Matambudziko Emhando Yedata muKurongeka.
Kushambadzira kuri pamwoyo wechero sangano. Ndiro dhipatimendi rinoparadzira shoko pamusoro pechigadzirwa. Idhipatimendi iro riri zambuko pakati pemutengi nebhizinesi. Dhipatimendi iro rakatendeseka, rinotungamira show.
Asi, ivo zvakare vari kunetseka zvakanyanya nekuwana yemhando data. Zvakatonyanya, sezvakataurwa naAxel, vangangove vasingatomboziva kuti data rakashata rinorevei uye zvavari kupokana nazvo! Heano mamwe manhamba akawanikwa kubva kuDOMO report, Marketing's New MO, kuisa zvinhu mugwara:
46% yevashambadziri vanoti kuwanda kwematanho edhata uye masosi kwakaita kuti zvive zvakaoma kuronga kwenguva refu.
30% vatengesi vakuru vanotenda iyo CTO neIT department inofanirwa kutakura mutoro wekuve nedata. Makambani achiri kufungidzira ari muridzi wedata!
17.5% vanotenda kuti pane kushomeka kwemasisitimu anounganidza data uye anopa pachena kuchikwata chose.
Nhamba idzi dzinoratidza kuti yave nguva yekushambadzira kuve neyako data uye yekuda kugadzirwa kuti ive zvechokwadi inofambiswa nedata.
Chii Chinogona Kuitwa neVashambadzi Kuti Vanzwisise, Kuziva, uye Kubata Matambudziko Emhando Yedata?
Kunyangwe data iri iyo musimboti wekuita sarudzo dzebhizinesi, makambani mazhinji achiri kunetsekana nekuvandudza yavo data management system kugadzirisa nyaya dzemhando.
Mune mushumo na Kushambadzira Evolution, inopfuura chikamu chechina che82% makambani ari muongororo akakuvadzwa nedata risingaenzaniswi. Vatengesi havachakwanisa kutsvaira kutsvaira kwemhando yedata pasi pe rug uye havagone kusaziva nezvematambudziko aya. Saka chii chingaitwa nevatengesi kugadzirisa matambudziko aya? Heano maitiro mashanu akanakisa ekutanga nawo.
Maitiro Akanakisisa 1: Tanga kudzidza nezve data quality nyaya
Mushambadzi anofanirwa kunge achiziva nezve data mhando nyaya seyavo IT waanoshanda naye. Iwe unofanirwa kuziva matambudziko akajairika anokonzerwa nemaseti e data anosanganisira asi asina kugumira kune:
Typos, zvikanganiso zvezviperengo, zvikanganiso zvekupa mazita, zvikanganiso zvekurekodha data
Nyaya dzine maconference ekupa mazita uye kushomeka kwezviyero zvakaita senhamba dzenhare dzisina macode enyika kana kushandisa mafomati akasiyana emazuva.
Ruzivo rusina kukwana senge maero eemail akashaikwa, mazita ekupedzisira, kana ruzivo rwakakosha runodiwa kumishandirapamwe inoshanda
Ruzivo rusina chokwadi semazita asiri iwo, nhamba dzisiridzo, maemail nezvimwe
Kusiyanisa data masosi kwauri kurekodha ruzivo rwemunhu mumwechete, asi anochengetwa mumapuratifomu akasiyana kana maturusi anokutadzisa kuwana maonero akabatanidzwa.
Dzokorora data apo ruzivo irworwo rwunodzokororwa netsaona mune imwecheteyo data sosi kana mune imwe sosi yedata
Heano maitiro asina kunaka data anotaridzika mune data sosi:
Kujairana nemashoko akaita semhando yedata, manejimendi data, uye kutonga kwedata kunogona kukubatsira kuenda kure mukuona zvikanganiso mukati meCustomer Relationship Management (CRM) chikuva, uye nekutambanudza ikoko, zvichikutendera kuti uite chiito sezvinodiwa.
Maitiro Akanyanya 2: Gara uchiisa Hunhu Hwadhi Data
Ndanga ndiripo, ndakaita izvozvo. Iko kuyedza kufuratira data rakashata nekuti kana iwe waizonyatsochera zvakadzika, chete 20% yedata rako raizonyatso shandiswa. Kupfuurisa 80% yedata inoparadzwa. Isa pamberi pemhando pamusoro pehuwandu nguva dzose! Iwe unogona kuzviita nekugadzirisa nzira dzako dzekuunganidza data. Semuenzaniso, kana iwe uchirekodha data kubva pawebhu fomu, ita shuwa kuti unounganidza chete data inodiwa uye kudzikisira kudiwa kwemushandisi kunyora nemaoko ruzivo. Kana munhu achinge achifanirwa 'kunyora' ruzivo, ivo vanonyanya kutumira mune isina kukwana kana isina chokwadi data.
Maitiro Akanyanya 3: Shandisa iyo Yakakodzera Dhata Hunhu Tekinoroji
Haufanire kushandisa miriyoni yemadhora pakugadzirisa mhando yedata rako. Kune akawanda ezvishandiso uye mapuratifomu kunze uko anogona kukubatsira kuti data rako rirongedze pasina kutanga kupopota. Zvinhu izvo zvishandiso izvi zvinogona kukubatsira nazvo zvinosanganisira:
Data profileing: Inokubatsira kuona zvikanganiso zvakasiyana mukati meseti yako yedata senge minda isipo, zvinyorwa zvakapetwa, kukanganisa zviperengo nezvimwe.
Kuchenesa data: Inokubatsira kuchenesa data rako nekugonesa shanduko inokurumidza kubva muhurombo kuenda kune yakagadziridzwa data.
Kuenderana nedata: Inokubatsira kuenzanisa seti yedata mune akasiyana masosi data uye kubatanidza / kubatanidza iyo data kubva kune aya masosi pamwechete. Semuenzaniso, unogona kushandisa data match kuti ubatanidze ese aripamhepo uye asina online data masosi.
Data yemhando tekinoroji ichakubvumidza kuti utarise pane zvakakosha nekutarisira basa risingaite. Iwe hauzonetseke nezvekupedza nguva uchigadzirisa data rako paExcel kana mukati meCRM usati watanga mushandirapamwe. Nekubatanidzwa kwechishandiso chemhando yedata, unozokwanisa kuwana data remhando pamberi pedanidziro yega yega.
Maitiro Akanakisisa 4: Batanidza Vakuru Vatungamiri
Vagadziri vezvisarudzo musangano rako vanogona kunge vasingazive dambudziko, kana kunyangwe varipo, vachiri kufunga kuti idambudziko reIT kwete zvekushambadzira. Apa ndipo paunofanira kupindira kuti upe mhinduro. Yakashata data muCRM? Yakashata data kubva muongororo? Yakashata mutengi data? Zvese izvi zvinonetsa zvekushambadzira uye hazvina chekuita neTI zvikwata! Asi kunze kwekunge mushambadzi akwira kuti ape zano rekugadzirisa dambudziko, masangano anogona kuita chero chinhu nezve data mhando nyaya.
Maitiro Akanakisisa 5: Ziva matambudziko padanho rekubva
Dzimwe nguva, dambudziko re data rakashata rinokonzerwa nemaitiro asina kunaka. Nepo iwe uchigona kuchenesa dhata pamusoro, kunze kwekunge iwe usinga ratidze mudzi wedambudziko, iwe unorohwa nemhando imwechete nyaya pakudzokorora.
Semuyenzaniso, kana iwe uchiunganidza dhata rekutungamira kubva papeji yekumhara, uye ukaona 80% yedata ine dambudziko nekupinda nhamba dzenhare, unogona kushandisa zvidzoreso zvekupinza data (sekuisa nzvimbo inosungirwa yekodhi yeguta) kuve nechokwadi chekuti iwe kuwana data chaiyo.
Mhedzisiro yematambudziko mazhinji edata iri nyore kugadzirisa. Iwe unongoda kutora nguva yekuchera zvakadzika uye kuona iyo yakakosha nyaya uye kuita imwe nhamburiko yekugadzirisa dambudziko!
Dhata Ndiwo Musana Wekushambadzira Mashandiro
Dhata ndiyo musimboti wemabasa ekushambadzira, asi kana iyi data isiri iyo, yakakwana, kana yakavimbika, unenge uchirasikirwa nemari kuzvikanganiso zvinodhura. Hunhu hwedata hahuna kugumira kudhipatimendi reIT zvakare. Vatengesi ndivo varidzi ve data revatengi uye nekudaro vanofanirwa kukwanisa kuita nzira dzakafanira uye tekinoroji mukuzadzisa zvinangwa zvavo zvinofambiswa nedata.
Farah Kim mushambadziri wezvigadzirwa zvemunhu ane hunyanzvi mukurerutsa ruzivo rwakaoma kuita ruzivo rwunoita kune vateereri vebhizinesi. Anonakidzwa nekutonga kwedata uye ane chinangwa chekubatsira mabhizinesi kukunda kusashanda zvakanaka kunokonzerwa nekusashanda manejimendi data.